Xubno ka tirsan mucaaradka oo kulamo ka billaabay Muqdisho | KEYDMEDIA ENGLISH
Xubno ka tirsan mucaaradka oo kulamo ka billaabay Muqdisho
Sarkaal-kaan, oo aan magaciisa qarinay, ayaa KON, u sheegay in shalay Musharixiintu, isla-meeldhigeen in si aan kala har lahayn loo garab istaago, musharaxa ugu cododka bata Golaha, taasoo uu ku tilmaamay rajada kaliya ee maanta hortaal Mucaaradka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xubnaha ugu saameynta badan, Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, oo ay ku jiraan Madaxweynayashii hore, Shariif iyo Xasan, Ra’iisul Wasaarihii hore, Kheyre iyo hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Warsame, ayaa caasimadda ka billaabay kulamo siyaasadeed oo xooggan, xilli ay soo wajahan tahay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya.
Xogo hoose, oo ay heshay Keydmedia Online, ayaa sheegaya in musharixiintaan, ay dib isku abaanuleen, kadib markii ay soo kordheen arrimo hor leh, sida kulamada siyaasadeed ee dhamaadka bishaan ka dhacaya Baydhabo, is-xulufeysiga Garowe iyo Kismayo, guuxda doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo qodobbo kale.
Wararku waxa ay sheegayaan in xubnaha shalay ku shiray Hotel Jasiira, ay iba-fureen dood in muddo ah daah saarnaa, taas oo ah, sida loo maareynayo codadka ay helaan baratamayaasha ku jira Golaha, marka la gaaro maalinta doorashada iyo in taas ka hor, mucaaradku dhisaantaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Sidoo kale, xoguhu, waxa ay tibaaxayaan in Mucaaradka Muqdisho, qorsheeyeen, hannaan labo afle ah oo ay ku wajahayaan, Siciid Cabdullaahi Deni, kaas oo xalay ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka ugu sarreeya dalka, isla-markaana codsaday in is-beddel doonka xil-raasidka ah u midoobaan sidii looga adkaan lahaa Farmaajo.
Musharixiintu dareen gooni ah kama muujin, musharraxnimada Deni, oo hore ayay u ogaayeen inuu sidaas sameyn doono, kaliya waxa ay doonayaan in ay la kaashadaan raacdeynta Farmaajo, laakiin cododka Mucaaradku halmeel ayay isugu biya shuban doonaan”, ayuu yiri mid ka mid ah howlwadeennada MW-yashi hore.
Sarkaal-kaan, oo aan magaciisa qarinay, ayaa KON, u sheegay in shalay Musharixiintu, isla-meeldhigeen in si aan kala har lahayn loo garab istaago, musharaxa ugu cododka bata Golaha, taasoo uu ku tilmaamay rajada kaliya ee maanta hortaal Mucaaradka fadhigiisu yahay Muqdisho ee muddada dheer hor taagnaa Kooxda Farmaajo.
Sida la saadalinayo, musharixiinta Hawiye, ayaa heli doona isku dar in ka badan inta ay helaan Deni iyo Farmaajo, taas oo reer Muqdisho xisaabta dhankooda u ridi karta, waa haddii musharraxa ugu sarreeya ay cododkooda u hibeeyaan.
Shariif, Xasan, Kheyre iyo Warsame, waxa ay sidoo kale billaabeen, kulamo gaar gaar ah, oo miisaankooda laga dareemay caasimadda, kuwaas oo ay la leeyihiin, ganacsatada, dhaqanka iyo bulshada rayidka ee degaankoodu yahay Muqdisho.
Maanta waxa ay kulan la qaateen Guddiga Doorashooyinka heer Federaal kaas oo ay kala hadleen, dedejinta doorashooyinka, ka mira dhalinta jadwalka doorasho oo ay soo saareen, iyo xal u helida caqabadaha dhamaystirka doorashooyinka.